Xildhibaano badan oo ka tirsan Hirshabeelle oo ka soo dhax-muuqday Golaha Wasiirada – Kalfadhi
Xildhibaano badan oo ka tirsan Hirshabeelle oo ka soo dhax-muuqday Golaha Wasiirada
JOWHAR, 23 JAN 2019 (KALFADHI)-Madaxweynaha Maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa shalay ku dhawaaqay isku-shaandheyn lagu sameeyay Golaha Wasiirada ee maamulka Hirshabeelle, arintaas oo mudooyinkii ugu dambeeyay aad loo hadal haayey. Golaha Wasiirada ee Madaxweyne Waare ayaa waxay u badan Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Maamulkaasi oo mucaarad ku ahaa Madaxweyne Waare.
Maxamed Cabdi Waare ayaa 12-ka Wasiir ee uu shalay ku dhawaaqay 11 ka mid ah waxay katirsan Baarlamaanka Hirshabeelle waxaana wararka ay heshay Kalfadhi ay sheegayaan iney ahaayeen Xubno mucaarad ah oo hore mooshin uga keenay Madaxweyne Waare. Sidoo kale Xildhibaanada Wasiirada laga dhigay ayaa maalmahaan waday abaabulka mooshin ka dhan ah Madaxweynaha.
Tirada Wasiirada cusub ee xalay lagu dhawaaqay ayaa ka kooban 35 Xubnood 34 katirsan waa Xildhibaanada Hirshabeelle, 12 Wasiir, 9 Wasiir-u-dowle iyo 14 Wasiir ku xigeen ayuu Madaxweynaha Hirshabeelle ku dhawaaqay Shalay, waxaa jiro wasiiro kale oo aan xil ka qaadis iyo magacaabis lagu sameeynin oo ka mid ah Wasiiradii hore. Wasiiradaas waxaa ka mid ah Wasiirka Arimaha gudaha iyo kan Maaliyadda.
Golaha Wakiilada ee Dowlad Goboleedka Hirshabeelle ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay arintaan. Inta badan Xildhibaanada kuwa aan wasiirada aheyn waa ay ka soo horjeedaan magacaabista Wasiirada cusub waxayna Madaxweynaha ku eedeeyeen inuu fulin waayay balanqaadyadii uu la galay Baarlamaanka.
Xildhibaan Ibraahim Maxamed Cali oo la hadlay Kalfadhi ayaa u weeraray Madaxweyne Maxamed Cabdi Waare isagoo dalbaday in Waare uu qaato masuuliyada dhibaatooyinka ay wajaheyso Hirshabeelle. “Markii aan dooranay waxa uu naga balan qaaday Gole Wasiiro oo kooban oo aan Xildhibaano ku jirin, ma dhicin, hada waa kasii daray oo Xildhibaano ayuu ka soo buuxiyay”, ayuu yiri Xildhibaan Ibraahim Maxamed Cali oo katirsan Baarlamaanka Hirshabeelle.
“Hirshabeelle hogaanka ayey ka jirantahay wasiiro la badalay waxba sooma kordhiyaan, kuwa hada la magacaabay waxba ma dhaamaan kuwii hore”, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Ibraahim Maxamed Cali “maalmaha soo socdo xaalada Hirshabeelle waa ka sii dari doontaan waxaa arki doontaa Xildhibaano is casilay”, ayuu u sheegay Kalfadhi.
Dhinaca Kale Xildhibaan Maxamuud Xuseen Mooge oo shalay loo magacaabay Wasiir ku xigeenka Kaluumeysiga iyo Kheyraadka Badda ayaa aad usoo dhaweeyay go’aanka Madaxweynaha ee wax kabadalka loogu sameeyay Golaha Wasiirada. Xildhibaanka ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in wasiiradaan ay ka badalnaan doonaan kuwii hore.
“Waxaa nahay qabiiriin iyo waaya arag wax kabadali kara xaalada Hirshabeelle, Madaxweynaha waan uga mahadcelinayaa go’aanka uu qaatay, waa mid lagu badbaadinayo Hirshabeelle”, ayuu Kalfadhi u sheegay Xildhibaan Mooge oo katirsan Golaha Wakiilada Hirshabeelle. “Hirshabeelle waxay u baahantahay xasillooni siyaasadeed iyo nidaama dagsan oo wax soo saar leh waxaana aaminsanahay inaa ku hogaamin karno marxaladaas”, ayuu markale sheegay Xildhibaan Maxamuud Xuseen Mooge.
Dhibaatooyin daran ayaa ka jira degaanada Maamulka Hirshabeelle waxaana xubnahaan cusub laga sugayaa iney wax ka qabtaan xaaladda Hirshabeelle ee ka sii dareyso. Dagaal Beeleedyo iyo Al-shabaab oo degmooyin go’doomiyay sidoo kalane kala xiray Balcad iyo Jowhar ayaa ugu weyn dhibka heesta shacabka Hirshaeelle.